Microsoft waxay bilaabaysaa barnaamij cusboonaysiin ah oogada oo la mid ah ta Apple | Wararka IPhone
Microsoft waxay bilaabaysaa barnaamij cusboonaysiin ah oogada oo la mid ah ta Apple
In muddo ah hadda, waxay umuuqataa in qorshooyinka cusboonaysiinta ay gaarayaan aaladaha elektarooniga ah. Mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee soo saaray wuxuu ahaa shirkadda Apple, markii ay ku dhawaaqday moodelada cusub ee iPhone 6s iyo 6s Plus, oo dadka isticmaala ay ku beddelan karaan moobilladooda sannad kasta ama labadii sanoba mar. iyadoo loo eegayo lacagta bil kasta ah ee aan diyaar u nahay inaan bixino. Barnaamijkaan wuxuu maalmo kahor yimid Spain, sida aan aragnayna, qorshayaashaan waa ka qaalisan yihiin intaad moodeysid.
Laakiin isagu kaligiis maahan. Waxyar kadib, Samsung waxay bilowday barnaamij la mid ahWaqtigan xaadirka ah waxaa laga heli karaa Boqortooyada Midowday oo keliya, taas oo adeegsadayaasha Samsung ay ku beddelan karaan aalado nooca ugu dambeeya sannad kasta. Ka tagida aaga taleefanka, Microsoft waa soo saaraha ugu horeeya ee adeegsada qaacidadan kiniiniyada ama kumbuyuutarrada dusha sare leh.
Barnaamijkan oo loogu magac daray Microsoft Surface Membership wuxuu u oggolaan doonaa dhammaan dadka isticmaala Microsoft inay cusboonaysiiyaan qalabkooda sannad kasta, iyagoo bixinaya oo keliya lacag bille ah. Xaqiiqdii, barnaamijkani wuxuu aad ula mid yahay kii Apple ay ku soo saartay iPhone 6s. Barnaamijkan cusboonaysiinta waxaa laga heli karaa dhammaan saddexda qaybood ee 'Surface' waana awoodnaa u kala bixi lacagta 18, 24 iyo 30 bilood, qiimaha waa sida soo socota:
Xajka 3 - $ 32.99 bishiiba 30 bilood, $ 37.99 bishiiba 24 bilood, iyo $ 48.99 bishii 18 bilood.
Qalabka Pro 4 - $ 51.99 bishiiba 30 bilood, $ 58.99 bishiiba 24 bilood, iyo $ 70.99 bishiiba 18 bilood.
Buugga Dhulka - $ 79.99 bishiiba 30 bilood, $ 89.99 bishiiba 24 bilood, iyo $ 108.99 bishiiba 18 bilood.
Dhammaan qalabka lagu helo foomkan, waxaa ku jiri doona dhammaan qalabka. Marka laga hadlayo Surface 3 waxay la imaan doontaa kumbuyuutarka la daboolay, sida Surface 4 oo waliba qalin la imaan doona, oo waliba laga heli doono Buugga Dusha sare. Waqtigan xaadirka ah qaabkan cusub ee lagu helo loona raaxeysto badeecadaha Microsoft Surface wuxuu ku egyahay Mareykanka mana ogin inay ku sii fidi doonto dalal badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Microsoft waxay bilaabaysaa barnaamij cusboonaysiin ah oogada oo la mid ah ta Apple
Waad salaaman tahay, waxaan kuu sheegayaa in qorshayaasha cusbooneysiinta ee Apple iyo Samsung ay haatan ku sugan yihiin Chile, ma ogi inay tahay Latin Amerika inteeda kale. Salaan
Waad ku mahadsan tihiin macluumaadka. Isbaanishka oo aan ogahay barnaamijka Samsung ma uusan imaan.
Jawaab Ignacio López
Apple Pay waxay gaaraysaa 30 bangi iyo kaararka deynta ee Mareykanka
Hooyo waxay badbaadisaa nolosha gabadheeda iyadoo adeegsaneysa Siri si ay ugu wacdo ER inta ay samaynayso CPR